Fipoahana varotra miditra | Martech Zone
Fipoahana varotra miditra
Zoma, Martsa 23, 2012 Alatsinainy, Septambra 23, 2013 Douglas Karr
amin'ny maha- maso ivoho miditra, heverinay fa mampientam-po ny maha-agents eo alohan'ny fiovana tsy mampino eo amin'ny sehatry ny maso ivoho. Manomboka amin'ny mpivarotra ka hatramin'ny mpamorona, ny tsirairay dia mijery bebe kokoa ny sary lehibe amin'ny marketing an-tserasera fa tsy ny miasa any amin'ny faritra silo na faritra fampiononana. Ny fiasana amin'ny media dia manome valiny lehibe kokoa… saingy tsy mora izany!
Ny marketing dia ny fandoavana ny sain'ny mpihaino anao ary ny fanandramana hitaomana azy ireo hiala amin'izay zavatra nataony taloha. Saingy noho ny tranonkala, niova ny lalao. Ny varotra miditra dia misy paikady marobe izay manintona ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanomezana azy ireo fampahalalana ilaina sy ilaina. Amin'ny fampiasana marketing miditra, afaka mahazo zero amin'ny mpanjifa izay maniry fatratra ny hividy ny zavatra amidinao ianao. Izahay dia mizaha ny habetsaky ny haino aman-jery miditra niditra sy ny fomba ahitan'ny orinasa fahombiazana amin'ity taona 2012. Avy amin'ny sary n'i G +, The Inbound Marketing Explosion.
Tags: fitorahana bilaogyfifamoivoizana mivantanamampihiditra barotrapejy pejytaratrafmmarketing varotrafikarohana karamaSEOhaino aman-jery sosialy
CMO dia mamoaka torolàlana mifandraika amin'ny tontolon'ny sosialy
Mar 23, 2012 ao amin'ny 10: PM PM
Ny namako dia mampiseho ny fiafaran'ny vanim-potoana sy ny fananan'ny tany hafa. Ny haino aman-jery sosialy no teny fampiasa… tsy mahagaga raha mirohondrohona any aminy ireo orinasa toy ny voromahery mankao amin'ny sandwich.
Heveriko fa rehefa mitombo ny tranonkala sosialy dia ho hitantsika koa ny fivoaran'ny orinasa. Raha te-hiasa amin'ity sehatra sosialy vaovao ity dia tokony hanana fiarahamonina ianao. Ary raharaham-piaraha-monina zatra asa sosialy… mampatahotra azy ireo izany. Tsy maintsy mianatra ny ho lasa izy ireo raha tsy izany dia ho faty. Tsotra sy tsotra.
Mar 28, 2012 amin'ny 10: 17 AM
Ireo mpanjifa dia tsy te-hahatsapa ho toy ny hoe tsenaina izy ireo. Ny varotra miditra dia ny fidirana amin'ny resaka fa tsy ny fanombohana azy. Ireo mpanjifa izay mila filàna dia hanandrana mitady vahaolana. Ny fiasana amin'ny varotra miditra dia manatsara ny fahafahanao ho tonga amin'izany vahaolana izany.
Mar 28, 2012 amin'ny 10: 35 AM
Eo afovoan'ny an'ity tabilao ity - diso ve ireo marika? Outbound no ambany, Inbound no ambony?
Mar 28, 2012 ao amin'ny 5: PM PM
Heveriko fa marina ny anao! Tsikaritr'i @freighter raha vantany vao namoaka azy izahay (aona… tsy noforoninay izany!).